Kuphela yi-2 1/2 hr drive kumantla eSydney okanye iyure enye usuka eNewcastle-iBundera Lodge likhaya lamaplanga elipholileyo elibekwe kwi-3 yeehektare zomhlaba wabucala kunye nenxalenye ye-1000 yeehektare ze-Eaglereach Highland Park yoluntu ebandakanya iMt George kunye neMoonabung Mountain Range. .
Ibekwe bucala kude kwezinye iindawo zokulala ngaphakathi kwepaki iBundera Lodge inamagumbi okulala ama-2 aphezulu aneebhedi ezi-2 zokumkanikazi + 2 ookumkani abangabodwa.
Ngokufanelekileyo izibini ezi-2 kunye nabantwana ababini, iintsapho okanye abafana abambalwa / iigals ezifuna ukubaleka.
Gcoba nje uxolo kwindawo ye-spa kumgangatho wangaphandle ojonge i-Barrington Tops okanye uthathe ithuba loncedo lwe-Eaglereach Highland Park imizuzu emi-5 unyuka intaba kubandakanya-inkundla yentenetya, idama lokuqubha, igumbi lemidlalo elinebhiliyoni kunye neetafile zeping pong, ukuhamba etyholweni, ukubukela. , I-Gym yangaphandle, indawo yokudlala yabantwana, i-lagoon swimming, iingoma ze-4WD kunye nenani leendawo zepikiniki ze-BBQ.
I-Eaglreach- yenziwe malunga neendawo zokulala ezingama-40 zonke ezinokufikelela kwipropati yomntu wonke equka zonke izibonelelo ezingentla.
I-Lodge ilungiselelwe ukuzityisa njengoko siyisebenzisa njengekhaya lethu leholide. Iziqholo ziquka: iti, ikofu ngoko nangoko & neembotyi, iswekile, ilitha e-1 yobisi, ipepile yetyuwa, izinongo, isipayi sokupheka / ii-oyile, iviniga, izinxibo zesaladi & neesosi.
I-Lodge ilungiselelwe ukuzityisa njengoko siyisebenzisa njengekhaya lethu leholide. Iziqholo ziquka: iti, ikofu ngoko nangoko & neembotyi, iswekile, ilitha e-1 yobisi, ipepile yety…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-2644